Fri, Jun 22, 2018 | 01:11:20 NST
बजेट अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारको आग्रह
काठमाडौं, असार ३१ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/ ७० का लागि एक तृतियांश बजेट खर्च गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश जारी गर्न आग्रह गरेको छ । आइतबार बिहान सिंहदरवारमा बसेको मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार सरकारले राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्न आग्रह गरेको हो ।
बजेट पारित गर्न मन्त्री परिषदको बैठक बस्दै
काठमाडौं, असार ३१ – बजेटको विषयमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दैछ । केहीबेरपछि सिंहदरबारमा शुरु हुने बैठकले बजेट पारित गर्ने स्रोतले बताएको छ । बजेट पारित गरेर अनुमोदनको लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वका संस्थानको नाफा घट्यो
काठमाडौं, असार ३० – यो वर्ष सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्थानको नाफा घटेको छ । सरकारी स्वामित्वका ३७ वटा सस्थानले गत बर्ष १० अर्ब ५५ करोड ५६ लाख नाफा गरेकोमा यो बर्ष ६ अर्ब ६७ करोड ६५ लाख मात्रै नाफा गरेका छन् ।
आंशिक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति
काठमाडौं, असार ३० – अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले पुर्ण बजेटमा दलहरुको बिचमा सहमति हुन नसकेकोले आंशिक बजेट नै आउने बताउनुभएको छ । चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पुनले आशिंक बजेट भनेको गत बर्ष खर्च भएको बजेटको एक तृतीयांश नै हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
विकास निर्माणको अवस्था निराशाजनक
कमल पराजुली/उज्यालो । काठमाडौं, असार ३० - यो बर्ष मुलुकको बिकास निर्माणको अबस्था निराशाजनक भएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्बजनिक गरेको आर्थिक सर्बेक्षण अनुसार फागुन महिनासम्म जम्मा १५ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे भएको छ । त्यस्तै ४५ किलोमिटर ग्राभेल र १ सय ८५ किलोमिटर कच्चि सडक बनेको छ । फागुन महिनासम्म नेपालको कालोपत्रे सडक ९ हजार ९ सय १७ किलोमिटर पुगेको छ ।
सहमतिमा बजेट ल्याउन महासंघ अध्यक्ष बैद्यको आग्रह
गोविन्द शर्मा/ उज्यालो । नेपालगञ्ज, असार ३० – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज बैद्यले सहमतिका आधारमा समयमै बजेट घोषणा गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको २० औं साधारणसभाको शनिबार उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष बैद्यले बजेटमा अवरोध नगर्न प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
विमानस्थल निर्माण प्रकृया रोकियो
पोखरा, असार ३० - पोखरा छिनेडाँडामा निर्माण हुन लागेको क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको निर्माण प्रकृया रोकिएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि टेण्डर आवहन लगायतका काम भएपनि मुल्यांकन प्रकृयाबाट अगाडि बढ्न नसकेको हो । केहि समय पहिले सरकारले पटक÷पटक गरी ८५ दिनको समय सिमा दिई बिमानस्थल निर्माणका लागि चीनका कम्पनीहरुवाट टेण्डर आह्वा गरेको थियो ।
यसवर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५६ प्रतिशत
काठमाडौ, असार ३० – मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर चालु वर्षमा पनि लक्ष्य भन्दा कम हुने भएको छ । ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ४ दशमलब ५ ६ प्रतिशतमा सिमित हुने अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । तर यो बृद्धिदर बिगत ३ बर्ष कै सबैभन्दा धेरै हो ।
दामनलाई ‘दामी’ बनाउने अभियान
हरि हुमागाई/उज्यालो । मकवानपुर, असार ३० – मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र दामनलाई स्थानीय बासिन्दाले ‘दामी दामन’ बनाउने अभियान थालेका छन् । सधै सरकारको मुख ताकेर बस्दा सम्भाबना भएर पनि धेरै पर्यटक नआएको निश्कर्ष निकाल्दै दामनका वासिन्दाले आफै अभियान शुरु गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजानिक गर्दै
काठमाडौ, असार ३० – अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण शनिवार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । चालु बर्षको बजेटको निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसारका कार्यक्रमको प्रगति विवरण आर्थिक सर्भेक्षणमा समेटिएको हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट कर्जाको समयावधि थप्यो
कमल पराजुली/ उज्यालो । काठमाडौं, असार २९ – नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले घरजग्गा तथा रियलस्टेटमा प्रवाह गरेको कर्जाको समयावधि एक बर्ष बढाएको छ । यसअघि २०६६ सालमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरि यो बर्षको असार मसान्तसम्म रियलस्टेट कर्जा १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने ब्यबस्था गरेपनि त्यसको अबधी एक बर्षको लागि थपिएको हो ।
द्वन्द्वपीडितका लागि आएको ६२ लाख रुपैयाँ फ्रिज
राजन्द्र कार्की/ उज्यालो । जाजरकोट, असार ३० – द्वन्द्वपीडितका लागि विनियोजित ६२ लाख रुपैया फ्रिज भएको छ । कार्यक्रम संचालनका लागि गठन गर्नुपर्ने समिति दलिय विवादका कारण गठन हुन नसकेपछि शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयबाट आएको रकम फ्रिज भएको हो ।
पुल र पोषण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले आठ अर्ब ८८ करोड दिने
काठमाडौं, असार २९ – विश्व बैंकले पुल र पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आठ अर्ब ८८ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकबाट प्राप्त हुने रकम मध्ये पाँच अर्ब ३३ करोड पुल निर्माण तथा मर्मतसम्भार कार्यक्रम तथा तीन अर्ब ५५ करोड ‘सुनौला हजार दिन’ पोषण परियोजनामा खर्च गरिने छ ।
काठमाडौ, असार २९ – सुनको भाउ यो हप्ता ५ सय रुपैंयाले घटेको छ । हप्ताको पहिलो दिन आइतबार ५६ हजार २ सय रुपैंया तोला रहेको सुन उतारचढाव हुँदै शुक्रवार अन्तिम दिन ५५ हजार ७ सय रुपैंयामा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।
निकुञ्ज भित्रका होटल नवीकरणबारे ब्यवसायीमा चर्को बिवाद
मोहन बस्याल/उज्यालो । चितवन, असार २९ – चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका होटल नवीकरणको विषयमा चितवनका होटल व्यवसायीहरुबीच विवाद चर्किएको छ । क्षेत्रीय होटल संघ चितवनमा आवद्ध धेरैजसो व्यवसायीहरु नवीकरणको विपक्षमा छन् भने संघका अध्यक्ष शंकर शैजु सहित केही व्यवसायीहरु नवीकरणको पक्षमा छन् ।
१० लाख बढी माछाका भुरा आयात
पोखरा, असार २८ - माग अनुसार उत्पादन हुन नसकेपछि, कास्कीमा बार्षिक १० लाखभन्दा बढी माछाका भुरा अन्यत्रैबाट आयात हुने गरेको छ । लेखनाथ नगरपालिकामा रहेको मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र बेगनासमा उत्पादन हुने भुराले माग धान्न नसकेपछि तराईका जिल्ला तथा भारतका विभिन्न ठाउँबाट भुरा आयात गर्नुपरेको हो । व्यवसायिक रुपमा माछापालन गर्नेको संख्या बढे पनि केन्द्रमा साना भुरा मात्रै उत्पादन हुने भएकोले कास्कीमा माछाका भुराको आयात बढिरहेको छ ।
किर्ते भरपाई र नक्कली बिलकै आधारमा ६२ लाख भुक्तानी
पुरुषोत्तम गिरी/ उज्यालो । सल्यान, असार २८ – जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानले किर्ते भरपाई र नक्कली बिलकै आधारमा द्वन्द्व पीडितका लागि आएको ६० लाख ४५ हजार रुपैयाँ एकैदिनमा भुक्तानी गरेको छ । दलीय विवादका कारण फ्रिज हुने खतरा बढेपछि किर्ते भरपाई र नक्कली विलकै आधारमा भुक्तानी गरेको हो ।
काठमाडौ, असार २८ – सुनको भाउ बिहीबार स्थिर छ । सुन बिहीबार पनि तोलाको ५५ हजार ८ सय रुपैंयामा कारोबार भैरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ र डलरमा कुनै घटबढ नआएकाले भाउ स्थिर रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।
हेटौंडा काठमाडौ सुरुङ मार्ग कार्तिकदेखि बन्ने
हरि हुमागाँई/उज्यालो । मकवानपुर, असार २८ – मकवानपुरको हेटौडा भिमफेदी, कुलेखानी, सिस्नेरी हुँदै काठमाडौ जोड्ने सुरुङमार्ग बनाउने काम आउँदो कात्तिकदेखि सुरु हुने भएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययन सकिएको छ ।
हरियो तरकारीको भाउ घट्यो
काठमाडौ, असार २८ – काठमाडौको कालीमाटी थोक बजारमा बिहीबार हरियो तरकारीको भाउ घटेको छ । आयात बढेकाले अघिल्ला दिनहरुको तुलनामा भाउ घटेको बिक्रेताहरुले बताएका छन् । बाहिरी जिल्लाबाट र स्थानीय हरियो तरकारीको उत्पादन बढी भएकाले अब तरकारीको भाउ घट्दै जाने उनीहरुको भनाई छ ।
एक जना मात्रै कार्यरत भए पनि श्रम कानुन कार्यान्वयन हुने
काठमाडौं, असार २७ - एक जना मात्रै श्रमिकलाई काममा लगाएपनि श्रम कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन सहमत भएका छन् । यसले लामो समयदेखि श्रम ऐनको दायरमा नपरेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले श्रम कानुनले तोकेको सबै सेवा सुविधा र अधिकार पाउने भएका छन् । काठमाडौंमा भएको तेश्रो राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा यो सहमति भएको हो ।
कान्तिपुर अस्पतालमा धर्ना
काठमाडौं, असार २७ - व्यवस्थापन र कर्मचारीहरुबीच पोहोर भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कान्तिपुर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले बुधबार मूल गेटमा २ घण्टा धर्ना दिएका छन् । ०६८ साल जेठ १९ गते व्यवस्थापन पक्ष र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन कान्तिपुर अस्पताल प्रा.लिबीच स्थायी, अस्थायी प्रक्रिया थाल्ने, अस्पताल बिनियम लागु गर्ने, सञ्चयकोषलाई व्यवस्थित गर्ने, उपचार खर्च शतप्रतिशत छुट गर्ने, श्रम ऐन लागु गर्नेलगायत १० बुँदामा सहमति भएको थियो ।
ऋण तिर्न नसकेपछि नेशनल ट्रेडिङ्ग कालोसुचिमा पर्ने
कमल पराजुली/उज्यालो । काठमाडौं, असार २७ - चरम आर्थिक संकटमा परेको नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड ऋण तिर्न नसकेपछि कालोसुचिमा पर्ने भएको छ । लिमिटेडले बिभिन्न बैक मार्फत लिएको ४२ करोड ऋण तिर्न नसकेपछि कालो सुचिमा पर्ने भएको हो । लिमिटेडले हिमालयन बैकलाई सबैभन्दा धेरै २८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । लिमिटेडले ऋण ब्याज समेत तिर्न नसकेपछि बैकहरुले कालोसुचिमा राख्ने अन्तिम चेतावनी दिएको बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिब लालमणि जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले मजदुरविरोधी विरुद्ध संघर्ष गर्ने
ललितपुर, असार २७ - अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघले मजदुरविरोधीका विरुद्ध प्रतिरोधात्मक संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छ । कुपण्डोलस्थित नेकपा–माओवादीको नेवा राज्य कार्यालयमा बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले मजदुर विरोधी गतिविधि, ठेकेदारी, ज्यालादारी र करारप्रथाको अन्त्यका लागि आवश्यक परे प्रतिरोध संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको हो ।
काठमाडौ, असार २७ – सुन तोलामा एकै दिन ६ सय रुपैँयाले घटेको छ । तोलाको ५५ हजार ८ सय रुपैँयामा सुनको कारोबार भईरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । मंगलवार सुनको भाउ ५६ हजार ४ सय थियो ।
बजेट कस्तो ल्याउने भन्नेबारे दलहरुवीच छलफल हुने
काठमाडौ, असार २७ – पूर्ण बजेट नल्याउने सहमति गरेका मुख्य चार राजनीतिक दल बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा बुधवार पनि छलफलमा जुट्ने भएका छन् । समय तय नभएपनि एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बजेट र राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका विषयमा छलफलमा जुट्ने भएका हुन् ।
भारत निर्यात हुन थालेपछि सानो गोलभेँडा महङ्गियो
काठमाडौ, असार २७ – सानो गोलभेडा बाहिरी जिल्ला र भारतमा निर्यात हुन थालेपछि काठमाडौको थोक बजारमा गोलभेडाको भाउ मंहगिन थालेको छ । सानो गोलभेडा बाहिर धेरै जान थालेपछि बजारमा यसको अभाव संगै भाउ पनि बढ्न थालेको बिक्रेताहरुले बताएका छन् ।
कौशलटारमा हिमालयन बैङ्कको शाखा
भक्तपुर, असार २६ – हिमालयन बैङ्कले ३९ औं शाखा भक्तपुरको कौशलटारमा मंगलवारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैङ्कको थिमी नगरपालिकाका पुर्वमेयर मदनकृष्ण श्रेष्ठ र बैक संचालक समितिका अध्यक्ष मनोजवहादुर श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
पेट्रोल पम्पमा डिजेलको भाउ निगमले तोकेभन्दा बढी
काठमाडौ, असार २६ – यातायात ब्यवसायीले पेट्रोल पम्पले डिजलको भाउ आयल निगमले तोकेभन्दा बढी लिने गरेको बताएका छन् । झापा, विराटनगर, महेन्द्रनगर, विरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा, दाङ्ग लगायत ठाउँमा डिजेलको भाउ लिटरमा ७५ पैसा बढि लिने गरिएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात ब्यवसायी महासंघका कोषाध्यक्ष सरोज सिटौलाले दावी गर्नुभयो ।
विश्वबैङ्कको १७ करोड खेर
उदयपुर, असार २६– विश्व बैंकले उदयपुरमा अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराएको १७ करोड भन्दा धेरै सहयोग अनुदान रकम त्यसै खेर गएको छ । दाताले दिएको सहयोग सही ठाउमा खर्च गर्ने विषयमा जिल्लाका सरकारी निकाय र दलहरुको ध्यान नजाँदा रकम खेर गएको हो ।
बिना प्रतिस्पर्धा योजना ठेक्कामा, रकम चलखेलको आशंका
जयनारायण यादव/ उज्यालो । बारा , असार २६ – बाराको कलैया नगरपालिकाले रकम लेनदेनको भरमा प्रतिस्पर्धा नगराइ पाँच लाख रुपियाको योजना जनजागृति कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको छ । कलैया ६ र ७ मा पर्ने खौराही खोलामा माछा मासु बजार निर्माणको पहिलो चरणमा सडक र कल्भर्ट निर्माण गर्न नगरपालिकाले टेण्डर आह्वान बिना नै जनजागृति कन्स्ट्रक्सनलाइ निर्माणको ठेक्का दिएको हो ।
अन्तरदेशीय प्रसारणलाईन बनाउने कम्पनीको शेयर होल्डर सम्झौता
सेन्छेलुङ लिम्बु/उज्यालो । काठमाडौं, असार २५ - नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाईन निर्माणका लागि गठन भएका २ वटा कम्पनीको शेयर होल्डर सम्झौता भएको छ । पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल पिटिसिएन र भारतको क्रस–बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी सिपिटिसीको काठमाडौंमा शेयर होल्डर सम्झौता भएको हो ।
पुरानो मिति राखेर ६४ वटा योजनाको सम्झौता
धनगढी, असार २५ - जिल्ला विकास समिती कैलालीले पुरानो मिती राखेर असार महिनामा करौडौका योजनाहरु सम्झौता गरेको खुलासा भएको छ । असार महिनामा कुनै पनि योजनाहरु सम्झौता गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएकोले जेठ ३२ गतेको मिती राखेर ६४ वटा योजनाहरु सम्झौता गरेको जिविस स्रोतले जनाएको छ ।
पोखराका ट्याक्सीमा मिटर राख्न कडाई
पोखरा, असार २५ - पोखरामा चल्ने भाडाका मिटर ट्याक्सीमा भाडा समायोजनको कामलाई कडाईका साथ अगाडी बढाईने भएको छ । पटक पटक भाडाका ट्याक्सीलाई मिटर जडान गरेर भाडा समायोजन गर्न आग्रह गरेपनि मिटर जडान नगरेपछि गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय कास्कीले मिटर जडान गरी भाडा समायोजनको कामलाई कडाई गर्न लागेको हो ।
श्रम तथा रोजगार सम्मेलन सुरु
काठमाडौं, असार २५ - श्रम तथा रोजगार सम्मेलन काठमाडौंमा शुरु भएको छ । ‘मर्यादित काम र रोजगारमुखी आर्थिक वृद्धिका लागि सुमधुर श्रम सम्बन्ध प्रवद्र्धन’ भन्ने नाराका साथ शुरु भएको सम्मेलन पर्सि २७ गतेसम्म चल्ने छ ।सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै श्रममन्त्री कुमार बेलबासेले बिदेशी लगानीभन्दा स्वदेशी लगानी सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
काठमाडौ, असार २५ – आइतबार तोलामा ४ सय ५० रुपैँयाले घटेको सुनको भाउ २ सय १ रुपैँयाले बढेको छ । सोमबार सुन तोलामा ५६ हजार ४ सय १ रुपैँयामा कारोबार भईरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । आइतबार सुनको भाउ ५६ हजार २ सय थियो ।
हरियो तरकारी १०० रुपैयाँ किलो !
एलबी थापा/उज्यालो । प्यूठान, असार २५ – तरकारी ब्यापारीको एकाधिकारले प्युठानमा तरकारीको भाउ आकासिएको छ । तरकारी संकलन केन्द्रबाट किलोको ४० रुपैयाँमा किनेको तरकारी ब्यापारीहरुले किलोको ८० रुपैयाँमा बेच्दा किसानहरुनै ब्यापारीसंग रुष्ट बनेका छन् ।
तीनवटा वित्तिय संस्था एउटै बने
काठमाडौ, असार २५ – एउटै समुहको लगानी रहेको ग्लोबल बैक, आईएमई फाईनान्स र लर्डबुद्ध फाईनान्स मर्ज भएर बनेको ग्लोबल आईएमई बैक लिमिटेडले सोमबारदेखि औपचारिक रुपमा कारोबार शुरु गरेको छ । काठमाडौको पानीपोखरीमा रहेको बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार बिहान भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बैंकको औचापरिक कारोबार शुभारम्भ गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले अहिले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताउनुभयो । सरकार सहमतिमा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको भन्दै प्रधा...
आजदेखि श्रम तथा रोजगार सम्मेलन
काठमाडौ, असार २५ – काठमाडौमा सोमबारदेखि श्रम तथा रोजगार सम्मेलन हुँदैछ । ‘मर्यादित काम र रोजगारमुखी आर्थिक वृद्धिका लागि सुमधुर श्रम सम्बन्ध प्रवर्धन’ भन्ने नाराका साथ शुरु हुन लागेको सम्मेलन असार २७ गतेसम्म चल्ने श्रम विभागले जनाएको छ ।
एक तृतियांस बजेट आउने निश्चित
काठमाडौं, असार २४ - अध्यादेश मार्फत पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने सरकारको प्रस्तावमा राष्ट्रपति सहमत नभएपछि एक तृतियांस बजेट आउने निश्चित भएको छ । बजेटका विषयमा परामर्श गर्न शनिवार शितल निवास पुगेका अर्थमन्त्री बर्षमान पुनलाई पनि राष्ट्रपतिले एक तृतियांस बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभएको थियो । अर्थमन्त्रालयले पनि पूर्ण र एक तृतियांस दुबै बजेटको तयारी गरिरहेको छ ।